Somaliland oo xoog kula wareegtay degmada Taleex ee gobolka Sool – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidamada maamulka Soomaaliland iyo maleeshiyaad taageersan Somaliland oo uu wato gudoomiyihii hore ee degmada Taleex Jaamac Canshuur (Ilweyn) ayaa maanta la wareegay gacan ku heynta degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaasoo ay horay ugu mursansanaayeen Somalilnad, Puntland iyo Khaatumo oo hadda degmada laga qabsaday.
Afhayeenka ciidamada maamulka Somaliland, Cusmaan Cabdillaahi Saciid ayaa warbaahinta u sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamadoodu la wareegeen degmada Taleex ee gobolka Sool ka tirsan, taasoo ay horay u maamulayeen maleeshiyaad ka amar qaata maamulka Khaatumo.
Lama soo sheegin wax dagaal ah oo ka dhacay Taleex, iyadoo ciidamada Somaliland gaadiid farabadan oo dagaal ku galeen magaalada, islamarkaana ciidamadii maamulka Khatumo isaga baxeen dagaal la’aan.
Maamulka Puntland oo sheegta degmada Taleex, islamarkaana mas’uuliyiin ka tirsan halkaas tegi jireen ayaan weli ka hadli falka uu ku dhaqaaqay maamulka Somaliland.
Dadka u dhashay degmada Taleex iyo degmooyinka kale ee gobolka Sool ayaa la kala safan maamullada Somaliland iyo Puntland, halka qolo saddexaad dhiseen maamul loogu magaca daray Khaatumo.
Khilaafka u dhaxeeya dadka gobolka u dhashay ayaa keenay in mar kasta murano siyaasadeed kusoo laalaabtaan gobolka Sool oo marba qolo sheganeyso.
Shilal khasaare badan geystay oo ka dhacay wadada Muqdisho & Afgooye